Pandakatenderera The Chirungu Premier League By Train | Save A Train
musha > Travel Europe > Pandakatenderera The Chirungu Premier League By Train
kubudikidza Chris Johns
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi(Last Updated On: 25/12/2020)
Nokuti vafambi avo kunge kufarira mitambo, Pandakatenderera England nokuti Premier League machisa kunogona kuva inokosha ruzivo. Nepo Zvikwata shoma kumuka uye vachawa kubva League mwaka mumwe, zvichireva kuti kumbobvira zvakangofanana kaviri mumutsetse, nguva dzose chokwadi kuti zviri vazadze England uye Wales. Izvi chaizvoizvo anoita Premier League inenge dzinongoitika avaiita iyi ndiani angada kuongorora nyika. Kunosanganisira maguta dzepamusorosoro, mamwe vaneshungu kuratidzirana vemunzvimbo tsika nemagariro, uye vamwe zvechokwadi nhandare dzinoshamisa. Plus, Vatasvi kubva guta unotevera vanogona kukupa vakanaka muchidimbu akakurumbira British mumaruwa!
Chokwadi pamusoro rwokuparidza mhando iyi inogona chakagadzirirwa mune mhando dzose dzakasiyana, yandakapiwa Premier League chinosanganisira 20 zvikwata por mwaka. Ichi chinhu ane mharidzo kunyange, akasiyana migwagwa aungatora uye maguta, nhandare, uye zvikwata unogona kuona.
London kuna Brighton
Zviri yakanakisisa kutanga rwendo kworudzi urwu muLondon zvikonzero zviviri. Chekutanga, zviri apo uri unganyanya nhunzi kupinda zvakadaro. uye chechipiri, zviri musha wandei Premier League yekuchengetedza, zvichireva kuti nzvimbo zvakanaka kutanga uye magumo rwendo rwenyu nokuti akanaka loop kumativi Britain. Unogona kutanga vanoverengeka netsvimbo, asi ndingada varumbidze kuona Chelsea pa Stamford Bridge. The vakatozodzokera iri rakaisvonaka, pamwe chete chepamusoro pamusoro Premier League nhandare achitaura 140 makore nhoroondo uye hunhu sezvo zvinhu kuti tirambe pakati yakanakisisa. Uye chikwata ranyura nguva nemakwikwi (uye anofanira kuva 2018 naizvo).
From London, imwe inonzwisisika nzira kutanga riri kumaodzanyemba vakananga Brighton. Ndicho kukurumidza kwazvo kukwira kuti rinoguma imwe England yepamwoyo Beach maguta Brighton. London Victoria chiteshi, London Bridge Station, uye London St. Pancras chiteshi zvose zvakananga Vatasvi kuti kutora nehasha neawa.
Kamwe muna Brighton, unogona ruoko makumbo wako nokufamba famba vamwe zvechokwadi chinokosha nzvimbo. chengarava veguta riri inozivikanwa (uye zvikuru kunakidza nekuvongwa ayo akanaka-kufanana chadenga), uye pane zvishomanana zvitoro uye vakwegura resitorendi nemaruwa ukoshi kuongorora. Football-akachenjera, unenge vakananga kuna Falmer Stadium, inova imwe vatsva vari League. Brighton & Hove Albion haisi Powerhouse iri pamusoro kutiza Chirungu nhabvu, asi Fans aro anogona kuva vaneshungu uye machisa iguru nzira vanopedza masikati kana manheru mu noushamwari Beach guta matsutso.
Lille kuenda kuLondon Eurostar Chitima
Rotterdam kuenda kuLondon Eurostar Chitima
Antwerp kuenda kuLondon Eurostar Zvitima
After Brighton, uchaita kutanga yodzoka uchikwira kumavirazuva, uye ipapo nzvimbo shoma mikana. Unogona kuenda Bournemouth kana Southampton muna Southwest, semuyenzaniso, sezvo vose maguta vane Premier League zvikwata. Asi nekuti nhabvu iri nani kuchamhembe (uye saka ndiwo maguta, arguably), zvakanaka kutanga zvinofamba kuchamhembe uyewo. Saka ndingada yemutemberi vaienda Cardiff, Wales. Zvitima kubva Brighton yemapurisa Cardiff Central anogona kumhanya kubva munenge mana mana uye nehafu maawa, pamwe pose kubva mumwe matatu kuchinja. The zvitima iri nzira kumhanya zvakawanda kana zvishoma zuva rose.
Cardiff kuna Liverpool
In Cardiff, unenge kuona Cardiff City pa Cardiff City Stadium, inova kumbonyanya yepedyo vakatozodzokera ichi pamwero. Uye kana iwe zvichaitika nenguva rwendo wako kuona tsere machisi pamusoro Swansea City, uchava mukati kuti vaitire chaicho. Izvi zvinofanira pakupedzisira kuva kumbonyanya kukurumidza vanorega Zvisinei vachienda vakakura bhora maguta kure kuchamhembe. The vatatu- kuti maawa mana chitima kubva Cardiff Central kuLiverpool Lime Street changu rutsigiro. Chinhu zvakarurama nguva dzose uye yakananga nzira, yemanyorero pamwe chete nokuchinja imwe kana mbiri, uye anotora iwe chaipo mumwoyo Chirungu nhabvu. Tisingatauri chitima anotora iwe pamwe chete Cotswolds, Vakamupfekedza dzinongoitika nzvimbo kuti ari mushanyi kukwezvwa pachazvo.
Liverpool kuna Newcastle
In Liverpool, yaungada tambounganidza nguva kuongorora, sezvo zviri zvechokwadi guta zvechokwadi uye anoshamisa. Asi nhabvu ichiri huru kukwezvana. Anfield, apo Liverpool anotamba, vanozivikanwa kuva pakati zvakanakisisa Premier League nhandare, uye vazhinji vanotenda ichi chingaitika gore nokuti chikwata wokuwanazve Premier League nokubwinya uye akakunda mumwe ushasha. Ndizvo kutaura kuti nhandare, kare yaizivikanwa simba, inofanira vava kungotaura nezvekudzoka nokuda kwegore kana kuti, uye aigona kwazvo kuita zvakanaka Football ruzivo kwose UK.
kubva ichi nguva, pane zvishoma mikana. Kana nguva yako ishoma, zvingava zvakanaka kuti pfupi chaizvo kuenda Manchester asati vakananga shure kuLondon. Kana pane nguva, zvisinei, Ndinoda vanokurudzira kuenda kare Manchester uye nechokuchamhembe, pane chii chinofanira kuva nehasha yemaawa matatu motokari kubva Liverpool Lime Street kuna Newcastle. Unogona kuwana zvakananga tasva, uye apo izvi sokunge wakarebesa tatamuka ino pepa yose pamepu, zviri zvechokwadi kwete rwendo zvakaipa.
Newcastle kuna Manchester
St. James 'Park mu Newcastle ringava nicest nhandare iri League, kunyange kana usingagoni zvikuru kuenzaniswa nhoroondo nzvimbo yakaita Anfield. Chinhu chakanaka, chete akauya, uye mumwe pane anogona kuva vakasvimha chido. chaizvo, mberi richangobva sungano opener, zvakanzi pfungwa Newcastle aigona rokurwadzisa Tottenham Hotspur nokuti zvitsva-mwaka ruzha musi Tyneside uye nekuchiva uye kudavira kuti anogona kuuya kubva boka iri. Kuti agumbuka haana kuva, asi iyi ichiri unokurudzira nzvimbo kuona mutambo nokuda chete nezvikonzero yataurwa. Kuti zvinoita munhu akakodzera chaizvo dhituwa.
Pashure kukurumidza machisi muna Newcastle, unogona kubata chitima kudzokera Manchester, dzimwe nguva pamusoro iroro kana kusaronga mabasa kunze. Newcastle Central Station kuna Manchester Victoria inofanira maviri nehafu awa rwendo pasina kuchinja kupfuura imwe.
Pane nzira dzakawanda mune Manchester, sezvo vaviri League rakakurumbira zvikuru zvikwata – Manchester City uye Manchester United – dana guta musha. Kana uri kunyanya kupinda nhabvu uye hausi kurishandisa senzira imwe urongwa hwakanaka, unofanira kuedza kubata vose zvikwata mune imwe zvinofambidzana, kana vakwanise. zvimwe, unogona uyewo pafiripi mari. Man Utd. Kuti Old Trafford ndiyo usingakanganwiki nhandare uye mumwe chete zvinoshamisa Fans; Emirates Stadium Man City ndiko kupfuura mamiriro-of-nounyanzvi, uye City kwave chikwata nani vachangobva.
Kamwe uri kuitwa Manchester chinhu kumeso, maviri nehafu kana-awa matatu chitima atasve shure London kubva Manchester Victoria kana Manchester Piccadilly. Panguva iyoyo, rwendo ari wrap! Kunyange ungada kushandisa nguva yako yasara muLondon kuona rimwe makirabhu hamuna kuona pakutanga rwacho. Sezvambotaurwa, pane dzakawanda zvakanaka mikana.
Wagadzirira kuongorora Train pakufamba uye vanakidzwe zvimwe nhabvu? yakanakisisa Website kuti Order Anorovedza matikiti ndiro Save A Train
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftouring-the-english-premier-league-by-train%2F%0A- (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#football #soccer Train Travel traveltips
Vaneshungu nezvezvinhu zvose firimu, nhabvu uye kuona mafirimu, kubatsira vamwe kuti nzira yavo kumativi ino. Kana ndine kupembedza nguva ndinoda kuti kunyora uye pfungwa dzangu uye nyaya. - Unogona baya pano ndibate